Maqaallada Ryan Lucht ee Martech Zone |
Maqaallada by Ryan Lucht
Ka hor intaadan ku biirin Cabbiraadaha Cro, wuxuu bixiyay adeeg suuq geyn oo buuxa oo socodsiinaya barnaamij tijaabo oo guulaystay oo ah Agaasimaha Suuqgeynta ee Wareysiga Weyn. Ryan wuxuu u keenaa indho istiraatiiji ah, faham qoto dheer oo ku saabsan cilmi -nafsiga isticmaalaha, iyo hal -abuurnimo xamaasad leh si loo hagaajiyo kooxda Metrics.
Talaado, Agoosto 24, 2021 Talaado, Agoosto 24, 2021 Ryan Lucht
Haddii aad raadineyso inaad socodsiiso barnaamij tijaabo ah si aad uga caawiso tijaabada ganacsigaaga & wax u barto, fursadaha waxaad isticmaaleysaa Cloud Optimizely Intelligence - ama ugu yaraan waad fiirisay. Optimizely waa mid ka mid ah aaladaha ugu awoodda badan ciyaarta, laakiin sida aalad kasta oo kale, waxaa laga yaabaa inaad u adeegsato khalad haddii aadan fahmin sida ay u shaqeyso. Maxaa ka dhigaya Optimizely aad u awood badan? Udub dhexaadka astaantan ayaa ah tan ugu xog ogaalsan iyo